ढङ्ग बिनाका नेता र बैरङ्ग चिठी जस्तो सरकार ! – Massive Khabar
Homeसमाचारढङ्ग बिनाका नेता र बैरङ्ग चिठी जस्तो सरकार !
निराश भएका नागरिकलाई आशा जगाउन छोडेर सरकार अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि बन्देज लगाउन खोज्दैछ । लहडमा होइन, प्रणालीमा चल्नुपर्ने बेला प्रधानमन्त्रीले पुरानो बानी छाड्न सक्नु भएको छैन । प्रधानमन्त्रीसहित नेकपाका शीर्ष नेताहरु गुटबन्दी, ‘इगो’ र लहडमा रमाउँदा नागरिकमा निराशा थपिँदैछ । न सरकार चलाउने जिम्मेवार नेताहरुको ढङ्ग फेरियो, न दुई तिहाइको रङ्ग नै ।
छाउगोठ भत्काउने अभियान अन्तर्गत दैलेखमा भत्काइए २४१ छाउगोठ !
पुर्व राजा बिरेन्द्रसंग संगै हिड्ने ९० बर्षिय हजुरबुवा, ऋण राजा विरेन्द्रले तिरिदिएका थिए, बिरेन्द्रले गरेका कुरा सम्झेर भावुक बने ! (भिडियो)
गुल्मीमा घटेको डरलाग्दो घट’नामा जुम्ल्याहा छोरी सहित आमाको ज्यान लि’ने पुरुष बल्ल समा’तिए हेर्नुहोस ! (भिडियो)